शैलुङ पालिका प्रवेश गरेपछि एक हप्ता बस्न मन लाग्छ देशभरीका ४ सय ६० वटा पालिकाहरु मध्ये सबै भन्दा ८८ नम्वर ल्याउन सफल
जीवन लामा मंगलबार, साउन १२, २०७८
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका देशभरीका गाउँपालिका मध्य प्रथम भएको छ । गाउँपालिकाले सबै वढि अंक ल्याउन सफल भएको हो ।गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा देशभरीका गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा जिल्लाको शैलुङ गाउँपालिका देशभरीका गाउँपालिका मध्ये सबै वढि अंक ल्याउन सफल भएको हो । देशभरीका ४ सय ६० वटा पालिकाहरु मध्ये सबै भन्दा ८८ नम्वर ल्याउन सफल भएको गाउँपालिकाले केन्द्र समेत तोकेर गाउँपालिको भवन सहित आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकामा डिजिटल नागरिक वडा पत्र जडान गरेको छ । सबै वडाहरुमा नयाँ भवन निर्माण कार्य पुरा गरेको छ । आवश्यक नीति निर्माण कार्य पुरा गरी अगाडी बढीरहेको यस गाउँपालिका कहिले काँही भने बिबाद्मा पनि पर्ने गर्छ । पर्यटन र कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको शैलुङ गाउँपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले समेत धनी मानिन्छ शैलुङ । यहाँको स्वच्छ हावापानी र सुन्दर वातावरणले जोकोहीको मन लोभ्याउन सक्छ । यही सुन्दर गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत प्रसाद दुलालसँग इदैनिक खबरका लागि जीवन लामाले गरिएका कुराकानीका केही अंश ।
तपाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष अबको करिब ६/ ७ महिनापछि कार्यकाल पूरा हुँदैछ । यसअवधिमा गाउँपालिकाले कस्ता कस्ता विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिए भयो ?
भरत प्रसाद दुलालः मेरो कार्यकाल लगभग केही महिनापछि पूरा हुन्छ । यस अवधिमा सोचेभन्दा बढी काम भएको म ठान्दछु । विकासकै नाम लिने हो भने धेरै छन् । त्यसैले म क्रमिकरुपमा भन्न चाहन्छु । विगतलाई नियाल्ने हो भने बर्षायाममा मुडेबाट हिड्दै हिड्दै अहिलेका गाउँपालिकासम्म पुग्ने व्यक्ति म नै हुँ । पहिलो कुरा शैलुङ गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल थिएन । कतिपय ठाउँमा नाम मात्रको सडक थियो । दोहोरो गाडि छिर्दैन थियो । अहिले सडक बिस्तार भएको छ । मलाई लाग्छ जिल्ला भरिकै फराकिला सडक शैलुङ गाउँपालिकामा मात्र छ भन्ने मेरो दाबी । मेरै कार्यकालमा हो सडक बिस्तार भएको । लगभग एक समय किलोमिटर स्तरउन्नती भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत नमूना सोलिङ शैलुङ गाउँपालिकामा भएको छ । जसले बागमती प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट घोषणा गरी पुरस्कार समेत दिएका छन् । प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म सहज तरिकाले आवतजावत गर्न सडक बिस्तार गरिएको छ । जनताको माग र आग्रहमानै सडकलाई प्राथमिकता दिएको हो । जनताले उत्पादन गरेका आलु, तरकारी निर्यात गर्न सडकको कारण सजिलो भएको छ । भीमेश्वर नगरपालिकाबाट शैलुङ गाउँपालिकामा तर्ने पक्की पुल मेरै कार्यकालमा बनेको छ । बनाउनको लागि रातदिन खट्ने काम पनि गरियो । सजिलो तरिकाले विकास हुँदैन भन्ने पनि मलाई थाहा छ । त्यसैले शैलुङ गाउँपालिकामा चक्रपथ निर्माणको तयारी भईरहेको छ । सडकमा पूर्णता पाउन कोशिस गरिरहेको छु ।
सडक बाहेक अरु विकासलाई कम प्राथमिकता हो ?
भरत प्रसाद दुलालः विकासले हिसाबले सबैलाई बराबरीनै प्राथमिकतामा राखिएको छु । त्यही कारणले योजनावद्ध ढंगले विकास निर्माण कार्यको थालनी गरेको छु । हुन त हाम्रै कार्यकालमा भूकम्प, कोभिड १९ र संघीय संरचनाको कारण धेरै चुनौती खेप्नु पर्यो । गाउँपालिकाले नयाँ ऐन, कानुनहरु निर्माण गर्दैमा धेरै समय खायो । गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना गर्न समेत वन कार्यालयसँग धेरै मुद्धा मामिला खेप्नु पर्यो । यस्तै यस्तै चुनौतीकाबीच पनि विकास निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छ । जनभावनाअनुरुपनै कामहरु भएका छन् । गरेका छौ । कोभिड १९ को कारण अकालमा ज्यान जानबाट रोक्नको लागि स्वास्थ्य उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिहरु लागी पर्यौ । अब हामी १५ वेडको हस्पिटल निर्माणको तयारीमा छौ । हाम्रै खटाई, मिहिनेतको कारण यो अस्पताल निर्माण गर्न सम्भव भएको ठान्दछु । त्यसैले स्वास्थ्य संस्था पनि शैलुङ गाउँपालिकाको लागि उत्तिकै प्राथमिकतामा परेको हो । शिक्षालाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकतामै राखिएको छ । जसले गर्दा कृषि प्राविधिक शिक्षाको पढाई सुरु हुन थालेको छ । प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता ठानेरै प्राविधिक शिक्षाको पढाई सुरु भईरहेको छ ।
शैलुङ गाउँपालिका त आलु, कोपी, र तरकारी उत्पादनको गाउँ भनेर पनि चिनिन्छ । कृषि क्षेत्रमा पालिकाले के कस्ता कार्यक्रम, योजना बनाएको छ नि ?
भरत प्रसाद दुलालः मुडेको आलु भनेकै शैलुङ गाउँपालिकाको आलु हो । हामीले दाबी गर्नुनै पर्दैन । काम हाम्रो, नाम उनीहरुको । शैलुङबासीले उत्पादन गर्छन् । पैसा कमाउछन् हामी यसैमा खुशी छौ । हामीले अब छिट्टैनै ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ गर्दैछौ । गुणस्तरलाई निकै ध्यान दिएका छौ । बोरामा हालेका आलु सबै राम्रा हुन्छ भन्ने हुँदैन । नराम्रा र कुहेको आलु ग्राहकलाई पर्यो भने पालिकाकै बेइज्जत हुन्छ । त्यसैले नाम भन्दा पनि गुणस्तर कायम गर्नेमा ध्यान गएको छ । किसानले बर्षायाममा मात्र होईन, जुनसुकै समयमा बेच्नको लागि चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरेका छौ । किसानको समस्यालाई ध्यानमा राखी आलु बिउ, औषधि, अनुदानको व्यवस्था समेत गरेका छौ । किसानहरु खुशी छन् । जीविकोपार्जनको लागि मात्र होईन आयआर्जनको लागि पनि शैलुङका युवाहरु किवी खेतीमा लागेका छन् । सबै ठाउँमा सिंचाईको व्यवस्था छैन । त्यसैले सिंचाईको व्यवस्था गरेका छौ । स्वच्छ खानेपानीको लागि एक घर एक खानेपानीको व्यवस्था गर्न पहल भईरहेको छ । धेरैको घरमा खानेपानी जडान भईसकेको छ ।
शैलुङ गाउँपालिका त पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि धनी मानिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि पालिकाले के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ नि ?
भरत प्रसाद दुलालः मलाई लाग्छ, सुन्दर र शान्त ठाउँ खोज्ने हो भने शैलुङ पालिका मात्र हो है भन्ने लाग्छ । शैलुङ डाँडा मात्र होईन । यसको आफ्नै विशेषता छ । प्राकृतिक सुन्दरता त छदैछ । यसको साथै धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले पनि शैलुङको महत्वपूर्ण विशेषता छ । यसको साथै शैलुङ पालिकाभित्रमा रहेका धेरै मठमन्दिर, गुम्बाहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरेका छौ । हामीले नेपालकै दोस्रो ठूलो, अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माण गरेका छौ । किरातेश्वर महादेवको मूर्ति स्थापना गरेका छौ । शैलुङडाँडासम्म पुग्नको लागि मिनी ग्रेट वालको निर्माण तयारीमा छौ । पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि गुरुयोजना तयार पारेका छौ । कालापानीदेखि शैलुङडाँडासम्म पुग्नको लागि पदमार्ग निर्माण गरेका छौ । कालापानीमा पर्यटकको लागि बासको व्यवस्था गरेका छौ । यी सबै सबै जोड्दा शैलुङ गाउँपालिका धेरै काम भएको म ठान्दछु र अझैं धेरै काम गर्न पनि बाँकी छ ।
तपाईको कार्यकालमा धेरै काम भएका छन् । बागमती प्रदेशको मात्रै होईन, देशकै नमूना कामहरु पनि भएका छन् । तपाईले थालेका कामहरु पूरा गर्नको लागि के गर्नुपर्ला ?
भरत प्रसाद दुलालः धेरै कामहरु पूरा भएका छन् । कतिपय कामहरु पूरा हुने क्रममा छन् । पूरा हुन नसकेका कामहरु भोलिका जनप्रतिनिधिले पूरा गर्नको लागि मेरो पनि उत्तिकै सहयोग, भूमिका रहन्छ । तसर्थ मेरो कार्यकालमा थालनी भएका र हुन बाँकी रहेका कामहरु पूरा गर्नको लागि म लागीपर्छु । मलाई विकास गर्न पाए खुशी लाग्छ । आफ्नो अभिभारा पूरा भएको ठान्दछु । विकासमा मेरो निरन्तरता र मिहिनेत उत्तिकै रहन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८, १६:५१:००
शनिबार, जेठ २२, २०७८, १९:३६:०० संक्रमितको घरदैलोमा स्वास्थ्यकर्मी लिएर पुगे शर्मा
बिहीबार, असोज ८, २०७७, १६:५६:०० भाँचिएको पुल अझै बनेन
शुक्रबार, साउन ३०, २०७७, १६:३३:०० शैलुङ गाउँपालिकाले खेतीयोग्य जमीन भएका किसान सूचीकृत गर्ने